नेपालमा यौ ;न कर्मीको संख्या २७ हजार, कुन शहर मा कति ? - dautarimedia.com
नेपालमा यौ ;न कर्मीको संख्या २७ हजार, कुन शहर मा कति ?
तेस्रो प्रकारका यौ न व्यवसायी जो डान्स बार तथा गेस्ट हाउसलाई आफ्नो सम्प र्क स्थान बनाएर व्यवसाय गर्छन्, उनीहरू मोबाइलमार्फत ग्राहकसँग सम्पर्क गरेर बोलाएको स्थानमा पुग्छन् वा आफूले बोलाउँछन् । उनीहरूको कमाइ महिनामा ५० हजारदेखि १ लाखको आसपासमा हुन्छ । चौथो प्रकारका यौ न व्यव सायी ग्राहक फेर्दै र खोज्दै हिँड्दैनन् । उनीहरूका नि यमित ग्राहक हुन्छन् । उनीहरू तिनैबाट आफ्ना सबैजसो आवश्यकता पूर्ति गर्छन् । घर–व्यवहार चलाउन पुग्ने आम्दानी गर्ने पाँचौं किसिमका यौ नक र्मी हरू उमेर ढल्कँदै गएका हुन्छन् । उनीहरू थोरै पैसाका लागि पनि यौ न बेच्न तयार हुन्छन् ।
काठमाडौं लगायत नेपालका प्रमुख सहरहरू धरान, विराटनगर, नारायणघाट, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवल, धनगढी, वीरगन्ज आदि सहरमा यौ न व्यवसाय फस्टाउँदो छ । एक यौ न व्यवसायीका अनुसार यी सबै ठाउँंमा गरेर महिनामा करिब ५० करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुन्छ । निजामती सेवादेखि प्रहरी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ, सवारी चालक, व्यापारी, उद्योगी यी सबै यौ नक र्मीका ग्राहक हुन् । नेपालमा हुने यौ न व्यवसायमा हुने करोडौं आम्दानी आखिर कहाँ खर्च भैरहेको छ त रु यौ नक र्मी महिला वा पुरुषले कमाउने करोडौं रुपैयाँ कहाँ लगानी गरिरहेका छन् उनीहरू रुमोजमस्तीमै उडाइरहेका छन् ? कि उत्पादनमूलक काममा खर्च गरिरहेका छन् रु यी प्रश्नको उत्तर सहज छैन ।
Previous: मलेसिया गएपछि किन घर बिर्सिन्छन नेपाली ? १६ बर्स सम्मपनि फर्केनन् सर्बजित
Next: अमेरिकामा छोरो मारिएकै ठाउँमा पुगेर सागरका पिताले गरे श्राद्ध (तस्वीरहरु सहित)